Hababka ugu fiican si loogu badalo cajalado ka GoToMeeting
> Resource > Video > Sidee ayaan u bedeli karaan duubay GoToMeeting?
Ma uun ogaatay in cajalado aad ka GoToMeeting ma awoodaan in la furo ama Radidiyaha aad kombuutarka? Tani ma markii ugu horeysay ee aad isku dayeen in ay Radidiyaha ah GoToMeeting ee duubo? Haddii ay haa tahay, markaas waa laga yaabaa in sababta oo ah codec ka leheyn. Inkastoo duubo waa in wmv, codec loo isticmaalo waxaa loogu tala galay ciyaaro daafaca ku GoToMeeting ee madal.
Waxaad isku dayi kartaa labada Habka 1: Iyada oo la taagey codec GoToMeeting ah ama; Habka 2: download Converter ah si ay u xalliyaan arrimaha codec khilaafsan.
Ka dib markii in, waxaad si fudud u bilaabi kartaa duubo cusub ee GoToMeeting la qabsiga yar ee Settings> Xulasho (badalo si file wmv vanilj ah, taas oo aan codec GoToMeeting ah) si aad cajalado mustaqbalka uu noqon karaa mid loo maqli karo iyada oo aan in badan oo ka mid ah gumaarka ah .
Haddii dhibaatadu ay weli, had iyo jeer dib kuu gudbin karaan hababka hoos ku xusan.
Habka 1: Ku rakib codec
Habka 2: Download Converter ah
Si loo furo ama ciyaaro cajalado aad ka GoToMeeting kombuutarka, waxaad u baahan tahay si loo soo dajiyo codec GoToMeeting ah ka hor ka soo HALKAN . Si fudud guji xidhiidhinta ka dibna file badbaadin ka hor inta aanad ordi rakibo. Just raac tilmaamaha ku-screen iyo in ka dib markii la bilaabi aad PC.
Markaas Waxaad isku dayi kartaa in aan bilowno aad Windows Media Player ama wax ciyaartoyda kale ee aad PC inuu u ciyaaro cajalado aad. Haddii kale, dooro ka xariiqday in cajalado aad ka dibna midig guji faylka si furan barnaamij defaulted aad kombuutarka.
Haddii fariin qalad ah weli jirtey ilaa, isku day inaad ka soo Habka 2 ; ayadoo laga soo degsado Converter dibadda.
Noocyada File iyo codec in waxaa taageera barnaamijyada defaulted kombuutarka la mararka qaar ku kooban karo. Si kastaba ha ahaatee, in booguhu waxay hoos si model ama version aad PC. Sidaa awgeed, waxaa laga yaabaa inaad u baahan tahay caawimo ee Converter dibadda si ay u badalaan cajalado aad ka GoToMeeting ka hor inta aadan u furi karin.
Mid ka mid ah converters talinayaa waa Wondershare Video Converter Ultimate (oo ku salaysan Top 5 talinayo Video converters ). Waxaad dooran kartaa in ay sameeyaan qaab beddelidda, si toos ah ( Xulashada 1 ), beddesho goobaha ( Xulashada 2 ) ama xataa xaalkaa cajalado aad ka hor beddelida ( Xulashada 3 ).
Xulashada 1: Conversion Direct
Burcad Wondershare Video Converter Ultimate ah,
Jiid-iyo-hoos u cajalado aad u gal barnaamijka,
Dooro Qaabka Output (ku salaysan cadcad, qalabka ama iwm),
Xulashada 2: Change Settings Ka hor Conversion
Muujinta file in aad rabto,
Riix Settings ,
Dheellitir goobaha aad file ee sida,
OK . ( Ku celi tallaabooyinka oo dhan, waayo, faylasha kale )
Xulashada 3: Edit cajalado Ka hor Conversion
Guji Edit ,
Edit faylasha aad,
Fiiro gaar ah : Haddii aad rabto in aad Radidiyaha cajalado aad ka GoToMeeting on Mac ah, hubi sida aad sidaa sameyn kartaa adigoo akhriya Hababka cajalado diinta ka GotoMeeting on Mac ah .